UNOGONA KUVA NEVAGARI VAKAWANDA
nemunyori: Max Csern Chivabvu 9, 2021
Vangani vagari venyika vanobvumidzwa muRussia inotongwa nechinyorwa chema 62nd cheBumbiro reRussian Federation. Iwo wekutanga Mutemo haurambidze kugara kwevanhu vakawanda. Iko hakuna izwi rinoenderana mukutonga.
MUNHU ANOGONA KUGARA SEI?
Mutemo weRussian Federation hauteme vagari vayo mune huwandu hwehukama hwakawanikwa. MuUkraine, kurambidzwa kwepasipoti yechipiri kuripo, asi kune nzira dzekuvatenderedza. MuKazakhstan, nzvimbo ino inodzorwa zvakanyanya kusimba.
VAGARI VANANI VANOGONESESWA MURUSSIA?
Vangani vagari venyika vanobvumirwa muRussia inotongwa nechinyorwa chema 62nd cheBumbiro reRussian Federation. Iwo wekutanga Mutemo haurambidze kugara kwevanhu vakawanda. Iko hakuna izwi rinoenderana mukutonga. Vanhu vokuRussia vane rusununguko rwakakwana rwekusarudza. Kuti munhu anokwanisa kuva nezvizvarwa zvingani, munhu wese anozvisarudzira, zvichienderana nezvido nezvido zvavo. Izvo chete zvinodiwa nenyika ndeyekuzivisa mamiriro matsva kune yekufambisa sevhisi pasati papfuura mazuva makumi matanhatu gare gare.
UNOGONA KUVA NEVAGARI VAKAI MUUKRAINE?
Mhinduro kumubvunzo wekuti vagari vangani vanogona kuva muUkraine ndeyakasiyana uye isinganzwisisike - imwe, yechiUkraine. Hugari hwakawanda hunorambidzwa nebumbiro renyika.
Asi munyika ino, ungani ugari waunogona kuva nawo, munhu wese anosarudza akazvimirira. Zvinenge zvisingaite kuranga vanotyora nekuda kwekushaikwa kwemaitiro.
Kunyangwe zvichikwanisika kuva nemapasipoti maviri kana hunyanzvi hutatu - zvese zvinoenderana nekugona kwemunhu. Mushure mezvose, haisi nyika dzese dzinosungirwa kuzivisa Ukraine kuti mugari wayo awana imwe pasipoti.
Inosara yekudzidza zvakadzama kuti rudzii rwehugari, uye shandisa mikana mitsva yakavhurika.
ZVINOGONESEKA KUTI UVE NENZVIMBO MBIRI MUKAZAKHSTAN?
Huwandu hwehugari hwaunogona kuve muKazakhstan hwakagadzwa neBumbiro, iyo yegumi chinyorwa cheBasic Law. Vanotyora kodzero yekubhadhariswa faindi nekudzoserwa munyika. Kana iwe uine ugari hweKazakhstan, yako sarudzo yekuwana ugari inofanirwa kutariswa uye kuyerwa.
↑ ungava nezvizvarwa zvingani ↑ zvizvarwa zvingani zvinotenderwa ↑ vangani vagari venyika vanobvumirwa muRussia ↑ vagari vangani vanobvumirwa muUkraine ↑ mangani magari enyika anotenderwa muKazakhstan ↑ Russia hunyanzvi hwehukama ↑ Ukraine hunyambiri ugari ↑ Kazakhstan hunyanzvi hwehukama ↑ Russia yechipiri ugari ↑ Ukraine rwechipiri ugari ↑ Kazakhstan chizvarwa chechipiri ↑ hukama hwehukama hunotenderwa ↑ kuva mugari wechipiri kunotenderwa ↑ hukama hwehukama hwakanaka ↑ yechipiri kuva mugari wemoindi ↑